Wefdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo masuuliyiinta amniga Puntland kulan kula qaatay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWefdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo masuuliyiinta amniga Puntland kulan kula qaatay Garoowe
September 29, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wefdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo kulan la qaatay masuuliyiinta amniga Puntland. [Isha Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wefdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa maanta oo Axad ah kulan la yeeshay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan iyo saraakiil katirsan ciidamada, sida taliska ciidamada Puntland ay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen boggooda Facebook-ka, balse ma aysan faahfaahin kulanka.
Wefdiga ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa asbuucaan yimid magaalada Garoowe ee caasimada Puntland, sida ilo-wareedyo madax-banaan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Wefdiga oo wata gaadiid iyo ciidan ayaan la sheegin ujeedka safarkooda.
Boqor Buurmadow oo laga sii daayay xabsi kuyaala magaalada Hargeysa
Hargeysa-(Puntland Mirror) Boqor Cusmaan Aw-maxamuud Buurmadow ayaa maanta oo Arbaco ah laga sii daayay xabsi kuyaala magaalada Hargeysa. Masuuliyiin katirsan maamulka Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in boqorka lagu sii daayay cafis madaxweyne. Boqor Buurmadow [...]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta oo Arbaco ah soo saaray jadwalka doorashooyinka madaxweynaha. 19-ka bishaan Agoosto ayay dhici doontaa doorashada madaxweynaha Jubbaland, sida uu muujinayo jadwalka ay sii daayeen guddiga doorashooyinka. Talaadadii, xubnaha [...]